Kenya : Antso Firaisankina Taorian’ny Fanapoahana Baomba · Global Voices teny Malagasy
Kenya : Antso Firaisankina Taorian'ny Fanapoahana Baomba
Voadika ny 10 Jolay 2012 4:24 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Swahili, Español, 简体中文, 繁體中文, English
Andro vitsivitsy monja taorian'ny nanokafana ny Vovonana GV2012 tao Nairobi, nahitana fanapoahana baomba mahafaty sy fakana an-keriny tao an-tanànan'i Mombassa sy Garissa tao Kenya. Nisy fipoahana nahafaty olona telo tao amin'ny bara fisotroana iray tamin'ny 24 jona, ny ampitson'ny fampitandremana nataon'ny masoivoho amerikana amin'ny hisian'ny fanapoahana tsy ho ela ao an-tanàna. Tonga tao amin'ny bara hijery lalao ampahefa-dalana Euro 2012 ifanandrinan'ny Anglisy sy ny Italiana ny mpanjifa tamin'io fotoana io.
Beegeagle manonona vavolombelona nanatri-maso :
“Vao tonga aho ary andalam-pisotroana eo am-piandrasana ny fanombohan'ny lalao baolina fandaka, no nahare fipoahana iray, dia mbola nisy hafa, ary nisy hafa ihany koa. Tonga aho dia nihohoka. Avy eo aho nahita fiara niainga sy nirifatra aoka izany sy vatana niampatrampatra etsy sy eroa,” hoy i Muthoni.
Ny voalohany volana jolay, tao an-tanàndehibe kenyana ao Garissa, ny andian'olona misarontava namono olona 17 sy nandratra olona 45 tamin'ny alalan'ny fanafihana mita-piadiana sy grenady tamin'ny fiangonana anankiroa. Ao amin'io tanandehibe io no misy ny tobin'ny tafika kenyana hiaingan'ny ady amin'ireo mpioko avy ao Somalia mifandray tendro amin'ny al-Qaida.
Tao amin'ny lahatsoratra noraisin'i Sahara Reporters i James Macharia no nanamarika :
Raha kristiana ny ankamaroan'ny Kenyana, maro an'isa kosa ny miozolomana ao Garissa. Misy mponina 150.000 ao an-tanàna, ahitana tsena lehibe hivarotana rameva, ampondra, osy sy omby, ary maro ny foko somalia.
Tanàndehibe Garissa faritany avaratra atsinanana kenyana. Sary arovana Creative Commons (CC BY-SA 3.0) hita Wikipedia an i Chking2.
Francis Njuguna manoratra ao amin'ny CatholicPhilly :
Ny fanafihana notontosaina tao anatin'ny fotoana iray tao amin'ny Katedraly Notre-Dame de la Consolation sy ny fiangonana protestanta Africa Inland tao an-tanànan'i Garissa ao avaratra no farany indrindra tamin'ny trangan-javatra nisesisesy hatramin'ny nandefasana ny tafika kenyana any Somalia handrava ny milisin'ny al-Shabaab.
Nandritra ny fanafihana mahery vaika tao amin'ny tobin'ny mpialokaloka ao Dabaab, vahiny mpiasan'ny mpanao fanampiana efatra avy any Kanada, Norvezy, Filipina ary akistan no nalaina an-keriny ary ny saofera kenyana no novonoin'ny ahiana ho milisin'ny Al-Shabaab. Noafahana izy ireo telo andro taoriana noho ny fiaraha-miasan'ny tafika somaliana nasionaly sy kenyana.
Nangotraka tokoa ny fanoherana sy ny fihetseham-po tamin'ny alalan'ny aterineto, ho fanamelohana ny fikasana hamono olona sy ho fiantsoana firaisankinam-pirenena ary ho fandrafetana ny asa ho fisorohana izay mety ho fanafihana ho avy. Lahatsoratra hitao ao amin'ny vohikalan'ny nation.co.ke izay gazety kenyana be mpamaky no niteraka fanehoan-kevitra maro avy amin'ny mpiserasera.
Manoratra i Ahmed Mohamed :
Andro matroka ho an'i Kenya izao. Te-hampiditra ady an-trano ireo tsy vanona ireo ; efa tahaka izao ihany no namotehany ny fireneny. Aza avelantsika hiditr atsy amintsika ny fankahalana. Efa niara-niaina finaritra an-taonjatony ny Miozolomana sy ny Kristiana ary hiaina toy izany mandrakizay isika. Tsy hisy fiantraikany eto amin'ny firenetsika ny asa tsivalahara ataon'izy ireo.
Ho an'i Michelline Ntara, tokony hanampy ny tobin'ny mpitsoa-ponenana ny fitondrana kenyana :
…. Fa fotoana kosa izao hiheveran'i Kenya indray ny fomba fandraisany olona. Nanampy tamin'ny fametrahana ny fandriampahalemana tamin'ny faritra maro tao Somalia ny tafika kenyana. Tokony akatona amin'izay ny toby fandraisana mpitsoa-ponenana eo amin'ny sisintany mampifandray an'i Kenya sy Somalia any ampiana ny olona hody any amin'ny tanindrazany. Mety ho miainga avy any amin'ireo tobin'ny mpitsoa-ponenana ireo ny asa tsivalahara ataon'ny mpampihorohoro ary dia miverina ao indray izy ireo avy eo. Na dia manao izay mety amin'ny fisamborana ireo jiolahy ireo aza ny tafika, sarotra ihany ny miady amin'ny fahavalo hatrato anatiny.
Manoratra i Triple A :
Ry Tanindrazana, izao no fotoana iantsoana ireo fanafihana ireo amin'ny anarany……fanafihan'ny mampihorohoro. Tsy misy dikany izany filazana azy hoe fanafihana fiangonana izany rehefa fantatsika rehetra fa ny andian'olona henja-pihetsika mifandray tendro amin'ny Alshabab no ao ambadika. Mananda lafo ny taonan'ny tsy fahalalàna ny Kenyana… efa fantatsika fa misy henja-pihetsika eto amin'ny firenena nefa nangina isika…..tsy afa-manohy intsony ny politikan'ny mody fanina isika. Ny dingana voalohany dia ny fiantsona ireo fanafihana ireo amin'ny anarany, fampihorohoroana
Manontany ny mpamaky iray hafa, Mohamed Abdi :
10 ora 20 min maraina ? efa andro mazava anie izany e! Misy zavatra tsy mazava ao, fa aiza ny mpiandraikitra ny fiarovana, ny tafika, ny polisy ny AP (Naotin'ny mpandika : Vondrona manokan'ny polisy) ? Maninona ny olona roa na telo mita-piadiana no manao izay tiany atao amin'ny folo ora maraina nefa anarivony ny miantsoroka ny fandriampahalemana ao an-tanànan'i Garissa? Mora kokoa ny nanidy ny faritra sy nisambotra ny meloka. Tsy namonjy ny kenyana tsy manantsiny izay efa mandoa ny hetra avy amin'ny hatsembohan'ny tavany hanakaramana azy indray ny mpitandro ny filaminana. Mahamenatra !
Manoratra i Mazzaroth Darkman :
Tsy maintsy miteny amin'ny Kenyana izay nitoraka grenady ny fiangonana sy toera-pitoriana ny filazantsara ny NSIS (sampam-pitsikilovana), tianay ho fantatra raha ankolafy miafina ao amin'ny politika kenyana no nanao izany ary raha ny Al shabab indray dia tsy maintsy mifoha ny sampam-pitsikilovan'ny tafika, mampiasa ireo mpitsikilo efa tafiditra tsara any an-takonan'i Kismayu ka hatrany Eastleigh ary hamarana ny tsy rariny faratampony …aoka izay ny fanaovana izay mipiripirina. Tsy ady ara-tafika ara-dalàna mihitsy ny tahaka izao
Nanolo-tena hanampy amin'ny fiarovana ny fiangonana ny fikambanana miozolomana iray :
Ankoatra izay, adidy amin'ny maha-moizolomana antsika ny miaro sy mamonjy ny ain'ny tsy manatsiny, ary ao anatin'izany izay ao am-piangonana. Miangavy ny rahalahy izahay hampita ny hafatra ary handrisika ny fijoroana eo amintsika miozolomana izay hisambotra ireo milaza ho miozolomana nefa mpiasan'ny devoly ary manao izao zava-mampihoronkoditra izao.
Noraisin'ny bilaogy My Joy Online ny vaovao ary misy fanehoan-kevitr'i John Mensah :
Lazao ny fiarahamonina am-pilaminana. Tokony ho maodely ho antsika rehetra izany. Mendri-piderana na dia ny fikasana aza.
Saingy tahaka ny tsy taitra amin'izany fanehoan-kevitra izany ireo mpanao fampihorohoroana :
Voalaza fa nahasambotra olona iray nitondra grenady roa nikasa ny hiditra ao amin'ny kianjan'ny foaram-pambolena ao Nakuru ny polisy kenyana, fotoana vitsy mialoha ny hahatongavan'ny filoha Kenyana Mwai Kibaki tao an-toerana.
Mandritra izany fotoana izany, mitohy ny famotorana ary telo amby valopolo ny olona nosamborina nandritra ny fandraofana natao taorian'ny fanafihana nihatra tamin'ny fiangonana roa tao Garissa.